အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး မသိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားတစ်ခွန်းဘယ်လိုအစချီမလဲ ? – Trend.com.mm
အချိန်မရွေး ၊ နေရာမရွေး မသိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားတစ်ခွန်းဘယ်လိုအစချီမလဲ ?
Posted on July 12, 2018 by Wint
ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပြောရတာ ဖော်ရွေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ သိပ်
အခက်ခဲမဖြစ်ပေမယ့် အနေအေးတဲ့လူ ၊ လူတွေနဲ့ စကားပြောနည်းတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ် သူစိမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ စမတ်တကျနဲ့ အချက်ကျကျစကား တွေပြောနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အခြေခံနည်းလမ်းတွေ ပြောပြ
မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတော့မယ်ဆိုရင် မေးခွန်းလေးနဲ့ အမြဲအစပြုပါတဲ့။ ဘာလို့ဆို
မေးခွန်းတွေက စကားအပြန်လှန်ပြောဆိုမှုအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရာရောက်ပြီး ဒီလူအပေါ် သင့်ရဲ့
စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖော်ပြရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်ကြားဆက်ဆံရေးအစက နေရထိုင်ရ
ခက်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ အေးဆေး တစ်ယောက်ပြောတာ တစ်ယောက်က follow လိုက်ရုံပါပဲ။ စကားပြောရင်း အကြိုက်ချင်းတူတာတွေ တွေ့လာတဲ့အခါ စကားပြောလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာပါ ။
ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုး မေးသင့်လဲ ?
အရင်ဆုံး စာဖတ်သူတို့ အတွေးထဲရောက်လာမှာ ” ငါဘယ်လိုမေးခွန်း မေးရမှာလဲ ” ဆိုတာပါပဲ။
open-ended question မျိုးသုံးပါ။ open-ended မေးခွန်းဆိုတာ yes or no လောက်နဲ့ အဆုံးသတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် သူ့ဘက်က စကားတွေအဆက်မပြတ်ပြန်လာစေမယ့် မေးခွန်းပုံစံပါ။ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေးနဲ့ မိသားစုရေးရာ ကိစ္စတွေတော့ ရှောင်ပြောပေါ့။ သူရော ၊ ကိုယ်ရောပြောချင်မယ့် စကားဦးတည်ချက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဒါဟာ စကားအပြန်လှန်ပြောခြင်းရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ။ လူအများစုဟာ ဒီအချက်ကို မလိုက်နာ
နိုင်ကြပါဘူး။ နားထောင်ရတာဟာ တစ်ချို့ အတွက်တော့ ပျင်းစရာကောင်းတတ်တယ်။ စကားအရမ်းများတဲ့လူတွေကို နားထောင်ခိုင်းကြည့်ပါ။ သူတို့တကယ် နားမထောင်နိုင်ပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ
ဒါပြီးရင်တော့ ငါဘာတွေပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားနေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်လူပြောစကားကို သေချာနားထောင်ပေးတတ်တဲ့အကျင့်က တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်နေသဘောထား ၊ အတွေးအမြင် ၊ ကိုယ်မထင်ထားတဲ့ အချက်လက်ကောင်းတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် များများနားထောင်ကြည့်ပါ။ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အခြေအနေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ စကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုဖြစ်ဖို့အတွက် မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေ ညီမျှနေဖို့ လိုပါတယ်။ လူတွေနဲ့ စကားပြောပါများရင် သူ့အလိုလိုဖြစ်လာမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်ဆန်းစစ်။ ဘယ်နေရာမှာ ငါပြောတာတွေလိုအပ်နေလဲ ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ သတိထားသင့်တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စကားပြောကောင်းတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေနဲ့များများ တွေ့ပါ။ မကြောက်ရွံ့ ပဲ နှုတ်ဆက်စကား စပြောပါ။ အပြုံးချိုချိုထားပါ။ လူချစ် လူခင်ပေါများတဲ့ စကားပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ ….
ကိုယျနဲ့မသိတဲ့ သူစိမျးတဈယောကျနဲ့ စကားစပွောရတာ ဖျောရှတေဲ့လူတှအေတှကျတော့ သိပျ
အခကျခဲမဖွဈပမေယျ့ အနအေေးတဲ့လူ ၊ လူတှနေဲ့ စကားပွောနညျးတဲ့ သူတှအေတှကျတော့
ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးဖွဈဖွဈ သူစိမျးတှနေဲ့ဆကျဆံတဲ့အခါ စမတျတကနြဲ့ အခကျြကကြစြကား
တှပွေောနိုငျဖို့အတှကျ ဆကျဆံရေး ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ အခွခေံနညျးလမျးတှေ ပွောပွ
မသိတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ စကားပွောတော့မယျဆိုရငျ မေးခှနျးလေးနဲ့ အမွဲအစပွုပါတဲ့။ ဘာလို့ဆို
မေးခှနျးတှကေ စကားအပွနျလှနျပွောဆိုမှုအတှကျ လမျးဖှငျ့ပေးရာရောကျပွီး ဒီလူအပျေါ သငျ့ရဲ့
စိတျဝငျစားမှုကို ဖျောပွရာလညျး ရောကျပါတယျ။ နှဈယောကျကွားဆကျဆံရေးအစက နရေထိုငျရ
ခကျတာမြိုးမဖွဈစဘေဲ အေးဆေး တဈယောကျပွောတာ တဈယောကျက follow လိုကျရုံပါပဲ။
စကားပွောရငျး အကွိုကျခငျြးတူတာတှေ တှလေ့ာတဲ့အခါ စကားပွောလို့ကောငျးတဲ့အခွအေနေ
ဘယျလိုမေးခှနျးမြိုး မေးသငျ့လဲ ?
အရငျဆုံး စာဖတျသူတို့ အတှေးထဲရောကျလာမှာ ” ငါဘယျလိုမေးခှနျး မေးရမှာလဲ ” ဆိုတာပါပဲ။
open-ended question မြိုးသုံးပါ။ open-ended မေးခှနျးဆိုတာ yes or no လောကျနဲ့ အဆုံးသတျ
သှားတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျမေးလိုကျတဲ့ မေးခှနျးကွောငျ့ သူ့ဘကျက စကားတှအေဆကျမပွတျပွနျ
လာစမေယျ့ မေးခှနျးပုံစံပါ။ နိုငျငံရေး ၊ ဘာသာရေးနဲ့ မိသားစုရေးရာ ကိစ်စတှတေော့ ရှောငျပွော
ပေါ့။ သူရော ၊ ကိုယျရောပွောခငျြမယျ့ စကားဦးတညျခကျြတဈခုဖွဈဖို့ အရေးကွီးတယျ။
ဒါဟာ စကားအပွနျလှနျပွောခွငျးရဲ့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြပါ။ လူအမြားစုဟာ ဒီအခကျြကို မလိုကျနာ
နိုငျကွပါဘူး။ နားထောငျရတာဟာ တဈခြို့ အတှကျတော့ ပငျြးစရာကောငျးတတျတယျ။ စကား
အရမျးမြားတဲ့လူတှကေို နားထောငျခိုငျးကွညျ့ပါ။ သူတို့တကယျ နားမထောငျနိုငျပါဘူး။ စိတျထဲမှာ
ဒါပွီးရငျတော့ ငါဘာတှပွေောရငျကောငျးမလဲဆိုပွီး စဉျးစားနတေတျကွပါတယျ။
တဈဖကျလူပွောစကားကို သခြောနားထောငျပေးတတျတဲ့အကငျြ့က တဈဖကျလူရဲ့စိတျနေ
သဘောထား ၊ အတှေးအမွငျ ၊ ကိုယျမထငျထားတဲ့ အခကျြလကျကောငျးတှေ ရနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မြားမြားနားထောငျကွညျ့ပါ။ လူတှနေဲ့ ဆကျဆံရာမှာ အခွအေနတေိုးတကျလာပါလိမျ့
ကောငျးမှနျတဲ့ စကားအပွနျအလှနျပွောဆိုမှုဖွဈဖို့အတှကျ မေးခှနျးနဲ့ အဖွတှေေ ညီမြှနဖေို့ လိုပါ
တယျ။ လူတှနေဲ့ စကားပွောပါမြားရငျ သူ့အလိုလိုဖွဈလာမှာပါ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျး ပွနျဆနျးစဈ။
ဘယျနရောမှာ ငါပွောတာတှလေိုအပျနလေဲ ၊ ဘယျနရောတှမှော သတိထားသငျ့တယျဆိုတာ
နောကျဆုံးအနနေဲ့ စကားပွောကောငျးတတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ လူတှနေဲ့မြားမြား တှပေ့ါ။
မကွောကျရှံ့ ပဲ နှုတျဆကျစကား စပွောပါ။ အပွုံးခြိုခြိုထားပါ။ လူခဈြ လူခငျပေါမြားတဲ့
အသည်းကွဲပေမယ့် သူမအလုပ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှအပြတ်မခံဘူးဆိုတဲ့ အဆိုတော် Pink